७० तोला सुन चोरी भएपछी खाली पसल कुर्दै पीडित, फिल्मी शैलिमा चोरी ! « Online Tv Nepal
७० तोला सुन चोरी भएपछी खाली पसल कुर्दै पीडित, फिल्मी शैलिमा चोरी !
Published : 13 March, 2020 9:31 am
जीवन भरि कमाएको पैसा र सम्पति छिन भरमा गा एब हुन्छ या भनौं कसैले चोरेर लैजान्छ भने पि डि तको मनमा के बित्ला रु तपाई अनुमान पनि गर्न सक्नु हुन्न होला । हो त्यस्तै भएको छ । घ टना हो नवलपुर जिल्ला गैंडाकोट नगरपालिकाको। कांग्रेस चोक स्थित मेनुका सुनचादी पसल बाट गत १८ गते ७० तोला सुन र ७ लाख नगद सहित २ किलो चादी चोरी भएपछी अहिले पि डित उमेश गहतराज खालि पसल कुर्दै आफ्नो हराएको सामान कहिले फेला पर्ला भनेर आश गरेर बसेका छन।
१० दिन पछि गैंडाकोटकै अर्को ठाउँमा नारायणी नदि किनारमा लकरको बक्सा बालुवामा गा डेको अवस्थामा भेटिएको थियो भने लकरमा केही टु क्रा सुन र अन्य कागज पत्र भिजेको अवस्थामा भेटिएको थियो। सुन्दै फिल्म जस्तो लाग्ने यो घ ट नाले अहिले चितवनमा चर्चा पाएको छ । सुन पसलमा चोरी भएको सिसीटिभी फुटेजमा सबै देखिन्छ । भिडियो हेरेको प्रहरीले अहिले सम्म चोर पत्ता लगाउन सकेको छैन । सिसिटिभीमा छर्लगैं देखिँदा पनि चोर पत्ता लगाउन नसकेपछि प्रहरीको आ लो चना हुन थालेको छ ।
त्यस्तै पीडितले आफुले चुस्त रुपमा न्याय नपाउने होकि भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन। प्रशासनले पटक पटक गुनासो गर्दा पनि हुँदैछ हुँदैछ भनेर टारेको बताएका छन। यसै विशयमा बुझ्न गैंडाकोट प्रहरी विटमा पुग्दा , हामिले अनुसन्धान गरिनै रहेका छौं र हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं , हामी जिरोमा छैनौं भनेर प्रहरी प्रशासनले बताएको छ। फिल्मी शैलीमा ७० तोला सुन र ७ लाख नगत चोरी भएपछी , खाली पसल कुर्दै पिडित , २० बर्षको दुख पानीमा । त्यती धेरै सम्पत्ती चोरिएपछि करोडपति रहेका सुन पसले अहिले सडकमा आएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार गैंडाकोट नगरपालिका ४ कांग्रेस चोकमा रहेको मानिका सुनचाँदी पसलबाट सुन र नगद चोरी भएको हो । महेन्द्र रामार्गमा रहेको पसलबाट आइतबार बिहान २ बजे सटर फोरेर सुन चोरी भएको हो ।